Fahasamihafana eo amin'ny Dihydropyridine sy ny Nondihydropyridine Calcium Channel Blockers | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Dihydropyridine sy ny Nondihydropyridine Calcium Channel Blockers | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Haiaina / mpikaroka / Difference Teo anelanelan'ny Dihydropyridine sy Nondihydropyridine Calcium Channel buy
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny dihydropyridine sy ny nondihydropyridine calcium channel blockers dia ny dihydropyridine calcium channel blockers dia mihetsika amin'ny alàlan'ny vasodilation vaskularika arteriôna, fa ny blockers calcium calcium non-dihydropyridine kosa dia mihetsika mifantina amin'ny myocardium .
Ny blockers fantsona kalsioma na CCB dia vondrona fanafody iray izay mety hanakorontana ny fihetsiky ny kalsiôma calcium amin'ny alàlan'ny fantsona calcium. Ireto singa ireto dia ilaina amin'ny fanafody antihypertensive, toy ny fanafody ampiasaina hitsaboana tosidra ambony amin'ireo marary voan'ny tosidra.
2. Inona avy ireo mpanakana ny kalsioma Channel Dihydropyridine
3. Inona avy ireo mpanakan-tsiranoka kalsioma Nondihydropyridine
4. Dihydropyridine vs Nondihydropyridine Calcium Channel Blockers amin'ny endrika Tabular
Inona avy ireo sakana amin'ny calcium calcium dihydropyridine?
Ny blocker de calcium calcium dihydropyridine dia molekiola azo avy amin'ny dihydropyridine. Ireto zava-mahadomelina ireto dia tena ilaina tokoa amin'ny fampihenana ny fanoherana ny lalan-dra sy ny tsindry arterial. Indraindray isika dia afaka mampiasa ity fanafody ity hitsaboana angina. Azontsika atao koa ny mampiasa azy io hitsaboana vasodilation sy hypertension, izay mety hitarika taratry ny tachycardia . Ity aretina ity dia mety hanimba ny marary manana soritr'aretina ischemika, izay mitranga vokatry ny fitomboan'ny fangatahana oksizena myocardial. Na izany aza, ity zava-mahadomelina ity dia mety hiharatsy proteinuria amin'ny marary mahatsapa nephropathy.
Ohatra vitsivitsy mahazatra amin'ny dihydropyridine dia misy amlodipine, aranidipine, azelnidipine, barnidipine, benidipine, clevidipine, sns.
Inona avy ireo mpanakana ny kalsioma Channel Nondihydropyridine?
Ny blockers fantson'ny calcium tsy dihydropyridine dia molekiola azo avy amin'ny phenylakylamine sy benzothiazepine. Matetika, ny phenylakylamine channel blockers calcium dia somary mifantina amin'ny myocardium, ary manampy amin'ny fampihenana ny fangatahana oksizena myocardial sy ny vasospasm coronary. Azontsika atao koa ny mampiasa an'io fanafody io hitsaboana angina. Raha ampitahaina amin'ny mpanakana fantsona kalsioma dihydropyridine, ireo fanafody ireo dia misy vasodilatory kely. Noho izany, ity fanafody ity dia miteraka tachycardia tsy dia reflexe. Ohatra vitsivitsy amin'ny blocker fantsona calcium phenylakylamine dia ahitana fendiline, gallopamil, ary verapamil.
Sary 01: firafitr'i Verapamil
Ny karazana blocker calcium calcium nondihydropyridine hafa dia zava-mahadomelina benzothiazepine. Ireo fitambarana ireo dia ao amin'ny kilasy antonony eo anelanelan'ny fitambaran'ny dihydropyridine sy ny phenylalkylamines, miankina amin'ny fisafidianana ireo fantson'ny kalsioma vaskola. Ankoatry ny phenylakylamine sy benzothiazepine, dia misy ihany koa ireo fitambarana hafa izay mety hiasa toy ny blockers calcium calcium nondihydropyridine.
Ny blockers fantsona kalsioma na CCB dia vondrona fanafody iray izay mety hanakorontana ny fihetsiky ny kalsiôma calcium amin'ny alàlan'ny fantsona calcium. Ireto singa ireto dia ilaina amin'ny fanafody antihypertensive, toy ny fanafody ampiasaina hitsaboana tosidra ambony amin'ireo marary voan'ny tosidra. Ny blocker de calcium calcium dihydropyridine dia molekiola azo avy amin'ny dihydropyridine raha ny blockers calcium nondihydropyridine kosa dia molekiola avy amin'ny phenylakylamine sy benzothiazepine.
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny dihydropyridine sy ny nondihydropyridine calcium channel blockers dia ny dihydropyridine calcium channel blockers dia mihetsika amin'ny alàlan'ny vasodilation vaskular arteriatika, fa ny blockers calcium calcium nondihydropyridine kosa dia mihetsika mifantina amin'ny myocardium. Ho fanampin'izany, ny blockers calcium calcium dihydropyridine dia manana fisafidianana antonony ho an'ny fantson'ny kalsioma vaskola, fa ny blockers calcium calcium nondihydropyridine kosa dia manana fidirana antenantenany ambany ho an'ny fantson'ny kalsioma vaskola. Ankoatr'izay, ohatra mahazatra ho an'ny dihydropyridine dia misy amlodipine, aranidipine, azelnidipine, barnidipine, benidipine, clevidipine, sns. Fa ny ohatra sasany amin'ny sakana calcium fhelllakylamine dia misy fendiline, gallopamil, ary verapamil.
Ity infographic manaraka ity dia mamintina ny tsy fitovizan'ny dihydropyridine sy ny nondihydropyridine calcium channel blockers amin'ny endrika tabilaoro ho fampitahana mifanila.
Famintinana - Dihydropyridine vs Nondihydropyridine Calcium Channel Blockers
Ny blockers fantsona kalsioma na CCB dia vondrona fanafody iray izay mety hanakorontana ny fihetsiky ny kalsiôma calcium amin'ny alàlan'ny fantsona calcium. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny dihydropyridine sy ny nondihydropyridine calcium channel blockers dia ny dihydropyridine calcium channel blockers dia mihetsika amin'ny alàlan'ny vasodilation vaskular arteriatika, fa ny blockers calcium calcium nondihydropyridine kosa dia mihetsika mifantina amin'ny myocardium.
1. " Nondihydropyridine vs. Dihydropyridine Calcium Channel Blockers ." Fitsaboana manokana , 4 Oktobra 2016.
1. “ Verapamil skeletal ” Nosoratan'i Fvasconcellos 20:18, 21 aprily 2007 (UTC) - Asa manokana (Public Domain) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny DL Alpha Tocopheryl Acetate sy D Alpha Tocopherol Fahasamihafana eo amin'ny Biotin sy Keratin Fahasamihafana eo amin'ny sela manokana sy ny tsingerin'ny sela Fahasamihafana eo amin'ny andrana biolojika sy sela Fahasamihafana eo amin'ny Fucoidan sy Fucoxanthin
Fahasamihafana eo amin'ny Microprocessor sy Microcontroller
Fahasamihafana eo amin'ny asidra Aminocaproic sy Acid Tranexamic
Fahasamihafana eo amin'ny Classic Fit sy Custom Fit
Fahasamihafana eo amin'ny tany masira sy alkona
Fahasamihafana eo amin'ny fivavahana sy ny kolontsaina
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Teoria Ostwald sy ny Teoria Quinonoid
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny philate solubilizing sy ny phosfat fanentanana
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sulfite sy Sulfur Trioxide